राजु लामा सहित अन्य ३ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको पुष्टी ! - jagritikhabar.com
राजु लामा सहित अन्य ३ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको पुष्टी !
गत मंसिर पहिलो साता ग्रीसमा भएको सवारी दु,र्घटनामा परी चार जना नेपालीको मृ,त्यु भएको पुष्टि भएको छ । गैरकानुनी रुपमा टर्कीबाट ग्रीस प्रवेश गर्ने क्रममा भएको गाडी दु,र्घटनामा परी मृ,त्यु भएका चारै जना नेपालीको सनाखत भएको छ ।
मृ,त्यु हुनेमा भिमेश्वर नगरपालिका–६ दोलखाका राजु लामा, आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३ रसुवाकी शर्मिला तामाङ भनिने रमिला घले, घिरिङ् गाउँपालिका–५ तनहुँका ओम बहादुर थापा र गौरीगंगा नगरपालिका–४ कैलालीका लक्ष्मण सापकोटा रहेका छन् । सापकोटाको यसअघि नै सनाखत भए पनि अन्यको सनाखत हुन बाँकी थियो ।
ग्रीस प्रहरीले पठाएको फोटो प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (इन्टरपोल) को वेबसाइटमा राखिएको थियो । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेर मृ,तकका परिवारले फोटोमार्फत श,वको पहिचान गरेपछि सनाखत भएको भिएनास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासका द्वितीय सचिव धनञ्जय मेहताले कन्सुलर सेवा विभागबाट सोमबार दूतावासलाई चार वटै श,वको पहिचान भएको जानकारी प्राप्त भएको र अब श,वलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको बताए ।
दुर्घ,टनामा घा,इते भएका अन्य दुई नेपालीको अवस्था भने सामान्य रहेको छ । भीमेश्वर नगरपालिका–९ दोलखाका मनु लामा र गौरीगंगा नगरपालिका–४ कैलालीका लोकराज आचार्य सोही गाडी दुर्घ,टनामा परेर बाँच्न सफल भएका थिए । हाल ग्रीसको एथेन्स शहरमा रहेका उनीहरुबाट नै गाडीमा अन्य चार जना नेपालीहरु पनि सवार रहेको खुल्न आएको थियो ।
गैरकानुनी रुपमा टर्कीबाट ग्रीस प्रवेश गर्ने क्रममा चार नेपालीसहित सातजना आप्रवासीहरूको सो दु,र्घटनामा मृ,त्यु भएको थियो । दु,र्घटनामा दुई नेपाली सहित आठ जना घाइते भएका थिए । ओभरलोड गाडी तीव्र गतिमा गुडेको हुँदा चालकले सन्तुलन गुमाएर दु,र्घटना भएको हुन सक्ने आंशका गरिएको छ । फाइल तस्विर